musha United Kingdom Vatambi veRugby Maro Itoje Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Maro Itoje Biography inoratidzira Chokwadi nezve ake ehucheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Mukoma (Jeremy), Sista (Isabel), Vasikana / Wife, Hupenyu hweMunhu uye Net Kukosha.
Zvichitaurwa zviri nyore, tinokupa iwe neMaro Itoje Nhoroondo. Yedu Biography yake inotanga kubva pamazuva ake ekutanga, kusvika paakava nemukurumbira.
Kuti ukwidze chishuwo chako chehupenyu, heino hudiki hwake kune vanhu vakuru gallery - pfupiso yakakwana yeMaro Itoje Bio.
Maro Itoje Biography. Tarisa yake uye yeHupenyu nyaya.
Hongu, munhu wese anoziva kuti akazvisimbisa semumwe we vatambi vanotungamira rugby kuchamhembe kwenyika.
Nekudaro, vashoma chete vadikani vemitambo vakaverenga nhoroondo yake pfupi, iyo inonakidza kwazvo. Neimwezve ado, ngatienderere mberi nememoyo yake.
Maro Itoje Yehucheche Nyaya:
Kutanga kuenda, ane zita rezita 'Iyo Pearl'. Zvisinei, zita rake rekuzvarwa ndi Oghenemaro Miles Itoje uye inogona zvakare kupfupiswa kuMaro Itoje.
Iyo blindside flanker yakazvarwa musi we 28th waGumiguru 1994 kuna baba vake veNigerian, Efe Itoje naamai, Florence Itoje, muCamden, North London.
Mutambi weRugby union mwana wechipiri pavana vatatu vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake vanoratidzwa pazasi.
Iyi ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzaanoshandisa nguva yake naamai vake, Florence Itoje nababa, Efe Itoje.
Semwana mudiki, iye ane tarenda Lock akaratidza kufarira kukuru kutora chikamu mumitambo yakasiyana. Icho chaive chinhu chemufaro kumhuri yake, uyo aifarira kutarisa mukomana wavo achishingairira achitamba nhabvu kana basketball nevezera rake.
Maro Itoje akarererwa pamwe chete nemukoma wake, Jeremy, uye munin'ina, Isabel. Pamwe chete nevanin'ina vake, aive neruzivo rwemwana.
Taona huwandu hwakanaka hwemifananidzo yake inoratidza nguva inofadza yaakapedza nemhuri yake.
Pakanga pasina mufaro mukuru kumutambi uyu kupfuura kuratidza hunyanzvi hwake kune avo vane hukama naye neropa.
Mufananidzo uri pasi apa unotaura nyaya yemukomana wedu anofarira kupedza nguva naamai vake uye mukoma mukuru.
Hunhu hwake hwekufara ndiko kuwedzerwa kwezviyeuchidzo zvinofadza zvaakava nazvo naamai vake uye nehama.
Kukura naJeremy, Itoje aigara achida kuyedza hunyanzvi hwake nehwehama yake. Kare kumashure, aive akanaka pakupfura, rugby, nhabvu, basketball, uye mimwe mimwe mitambo.
Nekufamba kwemazuva, mudiki prodigy aifanira kusarudza mutambo mumwe pamusoro pevamwe. Asi, achiziva kuoma kungaita sarudzo yakadaro, Itoje akaramba achitora chikamu mumitambo yese yambotaurwa kusvika awona gumi nerimwe.
Maro Itoje Mhuri Yemhuri:
Tisati taenderera mberi nerwendo rwake rwebasa, ngatitaurirei zvimwe chokwadi nezvemhuri yake. Sezviri pachena, Itoje anobva kumhuri yepakati-yemhuri kumashure.
Sevamwe mugari wepakati wega wega, maneja ake aingova nemari yaikwana kuti atarisire zvavanoda.
Vaigutsikana nemararamiro avo ari pakati nepakati asi vaivavarira nesimba kuti vaone vana vavo vachibudirira mubasa ramaroto avo.
Maro Itoje Mhuri Kubva:
Kunyangwe akazvarirwa muLondon, dzinza rake rakabatana nekondinendi yechipiri pakukura pasirese. Vabereki vaItoje maNigeri ari edzinza rekumaodzanyemba kwenyika yeWest Africa.
Ivo vaviri pamwe nehama dzake vakakurira vachidzidza nezvenhaka yavo yemhuri. Asati ave mutambi wehunyanzvi, amai vake vaiwanzomugadzirira echinyakare madhishi eNigerian kwaari.
Sezvineiwo, mhuri yake yese yakapfekedza yavo yekuNigeria zvipfeko pazuva rimwe rakatendeka.
Zvisinei, mitambo yake yaida kuti ateme mupunga muchena wakawandisa uye zvimwe zvekudya zvine mafuta, izvo zvaakaita.
Tichifunga nezvezita rake rekuti, Oghenemaro (zvinoreva kuti Mwari mukuru), mhuri yake ndeyevanhu veUrhobo kumaodzanyemba kweNigeria.
Mepu inokupa muongororwo weNigerian Mhuri Yemhuri. Ehezve, madzitateguru ake ndeweboka redzinza rekumaodzanyemba kwenyika yeAfrica.
Chii chimwe?… Vanhu veUrhobo vanotenda kuti munhu ariko sevanhu vaviri. Muchidimbu, murume ane muviri wemweya (Erhi) uye nemuviri wenyama (Ugboma).
Maro Itoje Dzidzo:
Paakazosvika zera, vabereki vake vakafara vakaita kuti aende kuSalcombe Preparatory School. Ikoko akawana dzidzo yake yepuraimari.
Mushure mezvo, akaenderera mberi nedzidzo yake nekunyoresa pachikamu chebhodhingi cheSt George's School muHarpenden.
Itoje aiva mwana ane chipo chedzidzo uye aifarira zvematongerwo enyika nenhetembo. Ava nemakore 11, Itoje akatanga kutamba rugby, iyo yaakaona ichimunakidza.
Mazuva ake kuSt George akarekodha nhevedzano yepamusoro soro muzvidzidzo.
Panenge panguva imwe chete iyoyo, vabereki vake vakamuita kuti abatane neHarpenden RFC, kwaakatamba pakati pe2005 kusvika 2011.
Zvechokwadi, kukudziridza unyanzvi hwake rakanga risiri basa riri nyore. Zvakadaro, Itoje akaisa moyo wake mukuburitsa zvakanakisa kugona kwake.
Maro Itoje Biography - Epakutanga Basa Hupenyu:
Hazvina kutora nguva yakareba pamberi petarenda rake rinoshamisa mu rugby richimupa mubairo kuHarrow Chikoro muLondon. Ichi chiitiko chaive sosi yemufaro kumhuri yake.
Mazuva ake paHarrow Chikoro akamuona achinyora kuvandudzika kukuru muhunyanzvi hwake.
Kune rumwe rutivi, yakava kukurudzira kumumhanyi ari kusimukira uyo aitenda kuti aigona kunyora zvimwe zvakaitwa mumitambo.
Kusiyana kwake mumitambo yakasiyana kwakamubvumira kumiririra England mumakwikwi ekupfura paU-17 level.
Kurova danho rekutanga repamutemo achiri kuyaruka kwakakanganisa mafungiro ake. Ehe, zvakakurudzira nzara yake yekuwedzera kuita.
Pakati pegore ra2011 na2012, Itoje akaita mashoma mashoma kuOld Albanian RFC, kwaakatamba sekiyi uye akapedzisa basa rake rehudiki.
Maro Itoje Biography - Mugwagwa Wemukurumbira Nyaya:
Mushure mechikoro chesekondari, Blindside Flanker haana kugutsikana nezvaakange adzidza pamusoro pemadzitateguru ake - Africa. Pakadzika mukati make, akanzwa kuti paive nezvakawanda zvakapfuma nhoroondo zvisati zvadzidziswa kuchikoro.
Nekudaro, akatanga chishuwo chekuburitsa zvimwe chokwadi nezve rudzi rwevatema uye kutaura achipokana nekusarura. Paaipinda Chikoro cheMabvazuva uye Africa Zvidzidzo muLondon, akatangawo basa rake reunyanzvi mu rugby.
Mutambi wenhabvu ari kusimukira akabatana neSaracens mu2012, kwaakatamba mutambo wake wekutanga weligi. Pana 19, akaita kudhara kwake kutaridzika kwechikwata chake mumwaka wa2013-14.
Maro Itoje Bio - Kubudirira Nhau:
Unoziva here?… Kugona kwake kwaishamisa zvekuti akaitwa kaputeni wechikwata cheU20 cheEngland muna2013. Ane makore makumi maviri nemaviri, Lock akazova mutambi wechidiki kudomwa muchikwata chevarume makumi mana nevatanhatu veBritish & Irish Lions sepakutanga. 22.
Sezvineiwo, akatevera makore ebasa rake akanyorera akateedzana ebudiriro-kupupura kubudirira. Pandinonyora iyi Bio, Itoje akahwina mazita mana ePremiership uye 4 European Champions Cup nemaSaracens.
Hapana mufaro mukuru kuna Itoje pane kuzviwana ari pakati peboka rinokunda.
Kunyangwe iwe uchiverenga ichi chinyorwa, iye pakupedzisira aratidzira zvimwe zvisingaverengeke chokwadi chenhoroondo yevatema kuburikidza neyekuratidzira muna 2021. Tinotarisira kuti izwi rake kuAfrica richava nerinzwi rakakwana kuti rinzwike pasi rose munguva pfupi kupfuura inotevera.
Maro Itoje Musikana Wemusikana:
Ichokwadi chaizvo kuti vateveri vanga vakatarisa mamiriro ehukama hwake semukurumbira. Ehe, pane huwandu hwakanaka hwevakadzi vakanaka avo vakafungidzira nezvekuva kwake musikana pamusoro pemakore.
Nekudaro, mutambi ane tarenda akachengeta hupenyu hwake hwerudo sechinhu chakakamurwa cheruzivo. Kunyange zvakadaro, vatsigiri havagare pasi vasina kuchera chokwadi nezvengoro yake.
Muna 2018, Maro Itoje akatamba nyeredzi pamwe naAmelia Windsor (muzukuru waDuke weKent uye hama yaPrince Harry) pamutambo wetsiva-iwo mutoo weTatler. Mufananidzo wacho wakaratidza Amelia akarara pane isina pamusoro rugby nyeredzi sezvaungaona pazasi.
Iwo mamodheru akaenzana zvakaenzana sevakaroora. Tinovimba runyerekupe nderwechokwadi.
Mushure mekuburitswa kwemagazini iyi, runyerekupe mumapepanhau rwakatanga kupararira rwekuti vaviri ava vatanga kufambidzana. Sezvo ini ndichinyora iyi Bio, Itoje haana kusimbisa kana kuramba iko kutaura kwevazhinji venhau.
Hupenyu hweMaro Itoje:
Semumhanyi anopona mumutambo wesimba rakakura remuviri uye kurovera-kumhanya-mhanya, zvirokwazvo haana kugona kurega. Akatemwa kubva padanda, Itoje achiri kugona kurarama paunyanzvi hwake kuti awane mazwi anogutsa.
Ehe, iye anonzwisisika anofunga uyo anodzora pasi huzivi hwake kuburikidza nhetembo. Ane pfungwa huru yekunakidzwa senge Dak Prescott.
Pane kumwe kushanya kwaItoje kuDubai, akashanyira gwenga renyika yacho pane kushanyira zvivakwa zvayo zvine mukurumbira.
Akatora shiri yake yaanofarira kuti aone renje panguva yekushanya kwake.
Chimwe chokwadi chinocherechedzwa nezveunhu hwake rudo rwake pakubika zvinonaka. Pamwe waisaziva kuti mubiki akanaka.
Maro Itoje Mararamiro echokwadi:
Isu hatisi kushamisika kuti iro rakapofomara padivi rinowana muhombe mari kubva kumitambo. Panguva yekunyora iyi Bio, Itoje anokanda muhoro wepagore weinosvika £ 850,000.
Mari iyi yakakura zvakakwana kuti aise Net Worth yake ingangoita miriyoni imwe yemamiriyoni kubva muna 1. Unoziva here?… Wepakati UK nyika ichafanirwa kushanda kwemakore mazana maviri nemakumi manomwe nenomwe kuti iwane chinogashirwa naMaro Itoje pagore.
Iye ane penchant yekutasva mabhiza akafanana Antoine Dupont. Nekudaro, iyo yaimbova Lock inonyara kuburitsa chokwadi chakaringana nezve imba yake nemota. Chatinoziva ndechekuti Itoje ane Land Rover, iyo anga achishandisa kwenguva yakati wandei ikozvino.
Aigara achiisa kumeso kunyemwerera achiziva kuti haafanire kunetseka nezve zvemari. Tarisa kutarisa kwake kwakanaka.
Maro Itoje Mhuri:
Zvaive zvakanaka zvisina basa kuvimba nen'anga kuti avaudze kana achizogona kana kwete. Izvi zvinodaro nekuti Itoje akawana rutsigiro rwese rwaaida kubva kumhuri yake yese achikura. Nekudaro, kukundikana kwaisambove sarudzo yekutanga.
Muchikamu chino, isu tichaburitsa pachena chokwadi chinonakidza nezvemhuri yake. Verenga pamusoro apo isu tichikuudza zvakawanda pamusoro pababa vake, amai, vanun'una uye hama dzehama.
Nezve Baba vaMaro Itoje:
Nhoroondo haife yakakundikana kuziva murume akasimudza nyeredzi nyeredzi pakati pekusarura. Haasi mumwe kunze kwaEfe Itoje, baba vemutambi wedu anoremekedzwa.
Akangotora kunyemwerera kwake kubva kuna baba vake. Kutenda Mr Efe Itoje, iyo nyeredzi diki yakawana zvese zviri zviviri zvedzidzo uye zvemitambo kugona.
Baba vaMaro muNigerian vakatamira kuUK nguva refu asati azvarwa. Mr Efe vaive vakatsunga kuona mukomana wavo mudiki achigona muzvidzidzo.
Kunyangwe paakatendera Itoje kuongorora zvemitambo, aive akagadzirira kumisa yaimbova Lock kuti isatambe kana mamaki ake akadonha. Nekutenda, mukomana wedu aive akapenya kwazvo. Nekudaro, akasangana nemamiriro ababa vake.
Nezve Amai vaMaro Itoje:
Ehezve, mama ndivo chigaro chekunyaradza kune avo vakakuvadzwa vanakomana. Muchidimbu, Itoje anowanzo fambisa simba kubva kumazwi anonyaradza aamai vake kana rwendo rwakaoma.
Iye ane zita rekuti Florence Itoje. Sezvakatarisirwa, Iyo Pearl yakachengetedza hukama hwepedyo naamai vake.
Amai vaMaro Itoje (Florence Itoje) vakafunga iye kuti asazomborasa rutendo mukugona kwake. Ivo vaviri vanoita sekugovana chinangwa chakafanana chekuwana budiriro.
Zvichida kufarira kwake kukuru muAfrican nhaka yake chibereko chenguva zhinji kwazvo dzaakagara pasi pekudzidzisa kwake. Ivo amai-mwanakomana duo vakaputsa internet pazuva raamai (Kurume 2020) nevhidhiyo yavo inonakidza vhidhiyo yakatorwa pazasi.
Nezve Vana vaMaro Itoje:
Sezvatakambotaura, chiratidzo cheChirungu chine vanin'ina vaviri vakanaka vaanokoshesa zvikuru. Zvinosuruvarisa, mukoma wake mukuru Jeremy akatambura nenyaya dzekurema kubva paudiki.
Paaidzidza manejimendi manejimendi kuLoughborough University, Jeremy akaedza kushanda panyama yake.
Unogona kuona musiyano wehukuru pakati pehama? Iwe unogona kutokanganisa Jeremy (L) seimwe nyanzvi icon kupfuura Maro kubva pamufananidzo.
Kunze kwemukoma wake, iye Pearl akaitawo ndangariro dzakawanda dzinonakidza pamwe nehanzvadzi yake mudiki, Isabel. Ndiye mumwe munhu anofara wemhuri yaItoje.
About Maro Itoje's Hama:
Kubva pakuonekwa kwezvinhu, mhuri yake yakakura inosanganisira vamwe vazhinji vane mukurumbira vatambi. Kutanga, mumwe wehama dzake ndiBeno Obano, uyo akaita England yake kutanga mu2021 Six Nations.
Zvinosekesa zvakakwana, Itoje naGloucester vaOllie Thorley vakava hama dzemurume mushure mekunge sekuru vaOllie varoorazve tete vaLock. Hatina rumwe ruzivo nezve dzimwe hama dzake patakanyora iyi bio.
Sangana nehama dzake, Ollie Thorley (L) uye Beno Obano (R). Ivo vaviri vane tarenda vezvemitambo saiye.
Maro Itoje Untold Chokwadi:
Kupeta hupenyu hwake, hezvino zvishoma nezvePearl izvo zvaizokubatsira iwe kuti uwane ruzivo rwakazara nezve Hupenyu Hwake Hupenyu.
Chokwadi #1: Maro Itoje iArsenal Fan:
Semutambi werugby, Itoje anonzwisisa mufaro wevateveri vewachi vanomufarira paanenge achiisa nhanho yake munhandare. Nenzira imwecheteyo, akapa yake yekuzvipira nguva nesimba rekutsigira Arsenal.
Itoje ave nechokwadi chekuti akashanyira Emirates Stadium sechiratidzo cherudo rwake rusingaperi kuchikwata cheEPL. Vhidhiyo iri pazasi inokuratidza maitiro ake paakasvika kumba kwepamba kweArsenal.
Chokwadi # 2: Chikonzero cheZita rake reNickname:
Maererano ne WalesOnline, Itoje akadaidzwa 'Iyo Pearl' nekuti anotamba zvikwata zviviri zvinomutora sedombo rinokosha uye chikomborero.
Takamuona achipa simba rake rese kubatsira timu yake kuhwina pazviitiko zvakawanda. Chokwadi, zita rake remadunhurirwa rinokodzera maitiro ake akasarudzika uye asina udyire kukirabhu.
Chokwadi # 3: Maro Itoje Tattoos:
Munyika mune yakakwira muzana muzana yevatambi vanoteerera kune hunyanzvi hwemuviri, nyeredzi yeEngland yatora imwe nzira. Iye ari pakati pevashoma vanozivikanwa vasina inki fomu ye tattoo pamuviri wavo.
Tafura iri pazasi inoratidza chidimbu cheruzivo nezve Maro Itoje. Inokupa iwe mukana wekusvetuka kuburikidza neprofile yake nekukurumidza sezvazvinogona.
Zita rizere: Oghenemaro Miles Itoje
Zita rekudanwa: Parera
Nzvimbo yekuzvarirwa: Camden, North London
Baba Efe Itoje
Amai: Florence Itoje
Vanun'una: Jeremy (mukoma mukuru)
, Isabel (munin'ina)
Hama: Ollie Thorley naBeno Obano
Musikana / Wife Kuve: N / A
Net Worth: £ 1 mamirioni (2021 Stats)
kukwirira: 1.95 m (6 ft 5 in)
Jonathan Sexton Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Chinhu chakakosha chakachengeta Itoje munzira yake inobudirira rudo rwake rukuru kune nhaka yake. Neichi chikonzero chaicho, haana kukanda mapfumo pabasa rake, kunyangwe paaifanira kubata nerusaruro.
Nekutenda, ndiye mumwe wevashoma veAfro-vakakurumbira vakataura vachipesana nekusaruramisirwa kwerudzi rwevatema. Pasina kupokana, vabereki vake uye vanin'ina vake vakaita basa rakakosha mukumubatsira kuti aone nyika yedu iine mwenje uri nani wekurongeka.
Tinogona kutaura nemufaro kuti mutambi wacho anofanira kurarama hupenyu hwega sezvo vanin'ina vake vanga vari chikamu cherwendo rwake rwekubudirira. Chokwadi, bio yake inoratidza kuti nzira yekumisikidza kurota kwako haisi nyore nguva dzose, asi mhedzisiro yacho inonakidza.
Ndatenda nekuverenga ichi chidimbu chedu chekuita memoir paMaro Itoje. Nomutsa tiudze zvaunofunga nezve hunyanzvi hwake muchikamu chekutaura pazasi.
Yeudiki Biography Diary- yeRUGBY Start VANOTA